Vokatry ny ataon’ny olombelona : karazam-biby roa isan-taona ringana | NewsMada
Vokatry ny ataon’ny olombelona : karazam-biby roa isan-taona ringana
Mampihoron-koditra! Tato anatin’ny 115 taona (1900-2015), ringana tanteraka ny karazam-biby manana taolan-damosina (vertébrés) manodidina ny 200. Izany hoe, raha atao ny kajy tsotra, karazam-biby roa isan-taona no lany tamingana. Nanao ny fanadihadiana ny manam-pahaizana avy any amin’ny Oniversiten’i Meksika. Voalaza fa ao anatin’ny faharinganan’ny biby faobe, andiany fahenina ny diavin’ny haibolantany ankehitriny.
Ratsy ny tarehimarika. Araka ny fanadihadiana ihany, tsy misy afa-tsy 700 sisa ny isan’ny biby guepards ny taona 2016 teo ary nihena 43% ny isan’ny liona atsy Afrika.
Nilaza Benoît Fontaina, mpahay ny biby ao amin’ny Mozean’ny tantara voajanahary any Frantsa, fa mahatratra 27.600 ny isan’ny biby ringana tato anatin’ny 100 taona. Anisan’izany ny biby mampinono, vorona, biby mandady sy mikisaka an-tanety, sns.
Tompon’andraikitra ny olombelona
Nambaran’i Gerardo Ceballos, mpikaroka any amin’ny Oniversiten’i Meksika, manampahaizana manokana amin’ny fihotsahan’ny tany sy tontolo mananaina, fa manana andraikitra lehibe sy voalohany amin’ity loza mihatra ity ny olombelona. Aringany ny zavamaniry, anisan’ny a-tsakafo sy fonenan’ny biby indrindra ny bibidia, aringana ny ala sy trandrahiny ny ambanin’ny tany.
Eo koa ny fihinanan’ny olombelona ny biby sy ny hazandrano be loatra, ny fahalotoan’ny rivotra iainana ary indrindra ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Vahaolana aroson’ireo mpikaroka ny hampihenana ny isan’ny olombelona (amin’ny fomba ahoana ??), ny fampihenan’ny firenena manankarena ny fihinanan-kena, ny fampihenana ny fampiasana angovo sy ny herinaratra, ny fiarovana ny biby ary ny fanampiana ny firenena andalam-pandrosoana.